सुन किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? यति धेरैले घ’ट्यो सुनको भाउ , तोलाको कतिमा झ’र्यो ? « गोर्खाली खबर डटकम
साउन २० गते । आज बुधबार ह्वात्तै घट्यो सुनकाे भाउ, यस्ताे छ आजकाे भाउ । आज बुधबार नेपाली बजारमा सुनको मुल्य घटेको छ । आज छापावाला सुन तोलामा ३ सय रुपैयाँ घटेकाे नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
आज छापावाला सुन ताेलामा ३ सय रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ९२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ । त्यस्तै आज तेजावी सुन पनि तोलामा ३ सय रुपैयाँ घटेर प्रतितोला ९१ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
यता चाँदीकाे मूल्य भने आज तोलामा १० रुपैयाँ बढेको छ । आज चाँदी प्रतितोला १ हजार २ सय ८५ रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
कुलमानलाई नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीकाे निर्देशन, शाक्यको राजीनामा माग्ने तयारी !
कुलमानलाई नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीकाे निर्देशन, शाक्यको राजीनामा माग्ने तयारी ! प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
सरकारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र ऊर्जा मन्त्री भुसालले अहिलेका प्रमुख हितेन्द्रदेव शाक्यको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कुलमान घिसिङलाई नै ल्याउने तयारी थाल्नुभएको हो ।
आज साेमबार फेरि बढ्याे सुनकाे भाउ, यस्ताे छ आजकाे भाउ
काठमाडौं उपत्यकामा फेरी लागु हुने भयो यस्तो नयाँ नियम, तुरुन्तै हेर्नुहाेस् !